Cologne miafina: mpitari-dalana an-tanàn-dehibe ho an'ny vahinin'ny tanàna sy ireo “olom-pirenena tsy maharitra”
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Alemana » Cologne miafina: mpitari-dalana an-tanàn-dehibe ho an'ny vahinin'ny tanàna sy ireo “olom-pirenena tsy maharitra”
Jona 15, 2018
Ny nomerao faharoa an'ny cologne miafina - mpitari-dalana an-tanàn-dehibe dia efa misy. Ity gazety amin'ny teny anglisy ity, izay natodika any amin'ny vahinin'ny tanàna sy “olom-pirenena vonjimaika”, dia mampiseho indray ny mpamaky ny faritra miafina sy tsy fantatry ny ankamaroan'ny tanàna. Ao amin'ny pejy 76 amin'ny magazine, dia ho hitan'ny mpamaky indray fa be dia be ny zavatra hita miaraka amin'ireo toerana mahasarika mpizahatany: olona mahaliana, fomba fijery tsy mahazatra, hevitra manome aingam-panahy ary foto-kevitra mamorona. Raha lazaina amin'ny teny hafa, Cologne dia maro loko, marolafy ary manavao.
Ohatra, ny olana amin'izao fotoana izao dia misy ny tatitra momba ny maritrano maoderina, ny zavakanto ankehitriny ao amin'ny galeria sy ny eny ivelan'ny habakabaka, ny kalitaon'ny fialamboly amin'ny kianja sy ny zaridainan'i Cologne, ny fiainana pelaka sy ny lesbiana ao an-tanàna, ny sehatry ny fandrahoan-tsakafo ao an-tanàna, ny lamaody maharitra ary ny kolontsain'ny klioba. Mahazo torohevitra sy adiresy anatiny ho an'ny mpamaky koa ny mpamaky amin'ny fitsidihany ny tanàna.
Cologne miafina dia ao amin'ny #urbanana
cologne miafina, navoakan'ny Stadtrevue-Verlag, dia natomboky ny Cologne Tourist Board, izay nanohana ara-bola ireo olana roa navoaka hatramin'izao. Ny famatsiam-bola dia avy amin'ny tetikasa #urbanana tohanan'ny EU, izay iarahan'ny mpiara-miombon'antoka Tourismus NRW, ny Cologne Tourist Board, Düsseldorf Tourismus ary Ruhr Tourismus miara-miasa amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany an-tanàn-dehibe mifantoka amin'ny famoronana.
Ny Cologne Tourist Board dia manao an'ity magazina ity ho an'ny andrim-panjakan'i Cologne sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy amin'ny asany. Hampiasaina amin'ny magazay ara-barotra sy fivarotana arabe ihany koa ity gazety ity hampiasa ny tsenan'ny loharanom-baovao ho an'ny fizahan-tany. Ny kopia tokana dia azo alaina maimaimpoana ao amin'ny ivon-toerana fanompoana an'ny Tourist Board mifanandrify amin'ny Katedraly. Tourus NRW dia hizara ilay gazety amin'ny amboaran-telo.
Cologne Tourist Board dia fikambanana fizahan-tany ofisialy ao an-tanàna ary izany no teboka voalohany hifandraisan'ny mpitsidika manerana an'izao tontolo izao, na ho avy hivarotra eto na handany fotoana fialan-tsasatra izy ireo. Miaraka amin'ireo mpiaramiasa aminy, ny Tourist Board ao amin'ny tanàna dia mitarika hetsika ara-barotra manerana an'izao tontolo izao ho an'ny tanàna ho toerana fitsangatsanganana sy toerana hanaovana fivoriambe. Tanjony ny hanatsara ny sarin'ny tanàna ary hametraka an'i Cologne sy ny faritra manodidina azy ho toerana fizahan-tany mahafinaritra ary toerana fivoriambe miavaka amin'ny tsena alemanina sy iraisam-pirenena. Mandritra izany dia mikendry ny hampiroborobo ny lanja fanampiny amin'ny toekarem-bahoaka sy ny faritra manodidina azy.
Momba ny #urbanana:
#urbanana dia tetik'asa iraisan'i Düsseldorf Tourismus, KölnTourismus, Ruhr Tourismus, ary Tourismus NRW novatsian'ny EU. Mifantoka amin'ny valisation fizahan-tany ny sehatra famoronana ao Cologne, Düsseldorf ary ny faritra Ruhr mba hanatsarana ny fizahan-tany tanàna mifantoka amin'ny famoronana. Izy io dia mikendry ny fampivondronana ireo vondron'ny manam-pahaizana momba ny fizahantany sy ny sehatra famoronana ary koa ny fampiroboroboana sy fampitana hevitra, tetikasa, fahitana ary toerana mamorona. Lohahevitra lehibe resahin'ity tetikasa ity ny famolavolana, ny sehatry ny zavakanto tanora ary ny zavakanto an-tanàn-dehibe, ny festival amin'ny tanàna, ny lamaody, ny haitao ary ny sehatry ny mozika eo an-toerana. Sambany ny DMO dia miresaka amin'ny mpizahatany ihany fa amin'ny "olom-pirenena vonjimaika" toy ny mpivahiny monina ao NRW mandritra ny fotoana voafetra ihany.
Trump LIVE any Hong Kong: Madame Tussauds nandefa ny laharana mivantana voalohany an'i Azia
Miara-miasa amin'ny governemantan'i Côte d'Ivoire ny Airbus